Kufuneka uvule uluphi uhlobo lwesitolo esikhulu sempahla yokuhlamba impahla?
Isikhundla samanje: Ikhaya -> News Equipment Equipment
Kufuneka uvule uluphi uhlobo lwesitolo esikhulu sempahla yokuhlamba impahla? Nangona kukho ezininzi iimpahla zokuhlamba i-napa izithengisa kwimarike yaseTshayina, kodwa ekuhlambiseni impahla enkulu yokuhlamba i-franchise brand ayininzi. Igumbi elikhulu lokuhlamba kwindawo nganye yinto encinci, imarike ibonakala ingabi naso. Ukuphanda umthombo wayo, ubuninzi bebhanki ye-franchise ayikwazi ukufumana impahla enkulu yokuhlamba impahla.
Umzekelo wokuvula ivenkile ye-franchise yevenkile okanye ivenkile ye-flagship idinga izixhobo ezinkulu zokuhlamba. Esi sixhobo esikhulu sokuhlamba esiveliswe kwiinto eza kuba yiyunithi yokukhetha nokuthenga nini,
Ingaba iyimveliso enkulu yengubo yemfuno emininzi yomkhosi, ezi zixhobo ezinkulu zikwenza ngokubanzi kumashishini okuhlamba, ixabiso lokuhlamba likhulu, le mishini yokuhlamba kunye nezixhobo zokulondolozwa kunye nokugcinwa kwinkqubo enzima. Ukudibanisa namava ukuba ufuna ukuvula ivenkile yokuhlamba, kubalulekile ukuvumela abantu abangasebenzisi izihlandlo eziqhelekileyo ukuba bafumane inkqubo yokuhlamba impahla, oku kunokwenzeka ukuba banokutsala ukulandelelana kobuchule bezobuciko kwaye bahlala bezama ukuthetha isabelo sabo ngaphandle kwamava emzimbeni, aba bantu banako umthengi, kodwa banako ukuwanikela umxholo wokwaneliseka.
Ngokubanzi impahla yokuhlamba impahla, impahla yokuhlamba impahla ayikho enkulu. Ukuba kwakudinga iimfuno ezinkulu zokuhlamba iimpahla, unokuthenga enye encinci okanye izixhobo zokuhlamba impahla. Ukuba aba bajoyine i-brand yezinto zokuhlamba impahla akuthengiswanga ngokuhlukileyo, ngeli xesha bangathengisa izixhobo zesekondari okanye ngeendlela zentengiso yokuthenga.
Inqaku lokugqibela: Indlela yokugcina izinto zokus...
Inqaku elilandelayo: Ziziphi izixhobo ezisisiseko k...